app ကို - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
ပင်မစာမျက်နှာ » Tag Archives: app ကို
Tag Archives: app ကို
Suitest Roku ဖုန်းများအတွက်အပေါ် Apps ကပများအတွက်ပထမဦးစွာစမ်းသပ် Automation ဖြေရှင်းချက်မိတ်ဆက်
Apple ကတီဗီများအတွက်နယူး AccuWeather က App, အမိုးလေဝသကြည့်အတွေ့အကြုံ Revolutionizes ပလက်ဖောင်းတစ်ဝှမ်း AccuWeather ၏ Global ရောတိုးချဲ့
သီးသန့်အမျိုးအစား-ဦးဆောင်တိုးမြှင့်မှုများအပြန်အလှန်ရာသီဥတုမြေပုံများနှင့်ရေဒါ, မူပိုင်ခွင့် AccuWeather MinuteCast မိနစ်-by-မိနစ် Hyper-ဒေသခံခန့်မှန်းချက်, 100 + ဘာသာစကားများနှင့်တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများအတွက်ဒေသတွင်းအကြောင်းအရာနှင့်ထို့ထက် ပို. ပါဝင်သည်။ AccuWeather ကို Global မိုးလေဝသရေးစင်တာ - မေလ 16, 2016 - AccuWeather, ရာသီဥတုသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်, ယနေ့ Apple ကတီဗီများအတွက် All-သစ်ကို AccuWeather app ၏ပစ်လွှတ်ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါဆန်းသစ်အမျိုးအစား-ဦးဆောင် app ကို revolutionizes ...
ဘလွန်းဘာ့ဂ်ရုပ်မြင်သံကြားဗြိတိန်လွှဝန်ဆောင်မှု TVPlayer အပေါ်လွှတ်တင်
လန်ဒန်, အင်္ဂါနေ့ 12 ဧပြီလ 2016: TVPlayer, တစ်ပတ်ကို 600,000 ထူးခြားတဲ့ကြည့်ရှုထက်ပိုမိုနှင့်အတူဗြိတိန်၏လူကြိုက်အများဆုံးစားသုံးသူ streaming များပလက်ဖောင်းများ၏တဦးတည်း, ယနေ့ဦးဆောင်သည့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးသတင်းရုပ်သံလိုင်း, Bloomberg သတင်းဌာနကရုပ်မြင်သံကြားက၎င်း၏ multiscreen ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်ဖြန့်ချိထားပြီးကြေညာခဲ့သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းထက်ပို 360 သန်းအိမ်ထောင်စုပေါင်းရောက်ရှိရာဘလွန်းဘာ့ဂ်ရုပ်မြင်သံကြား, ရရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်ကြောင်း 63 အခမဲ့-to-အမြင်လိုင်းများပူးပေါင်းမည် ...
LifeFlix ဗားရှင်း 1.5 Now ကိုရရှိနိုင်
Salt Lake City, Utah - ဖေဖော်ဝါရီလ 9, 2016 - LifeFlix, စောင့်ကြည့်ကာကွယ်ပေး, သင်၏ဗီဒီယိုကိုတိပ်အမှတ်တရများဝေမျှဖို့အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကို Mac App ကိုအားလုံးသင့်ရဲ့ DV, HDV နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် Hi8 တိပ်ခွေတင်သွင်းဖို့ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ LifeFlix ဗားရှင်း 1.5 သာ $ 29.99 အဘို့အကြှနျုပျတို့၏ site သို့မဟုတ် Mac အတွက် App ကိုစတိုးဆိုင်အပေါ်ယခုရရှိနိုင်, သို့မဟုတ်သင်ကြိုးစားနိုင် ...
သင့်ရဲ့ iPad ကို CTRL + Console နှင့်အတူတည်းဖြတ်ဖို့လျှောက်ထား!
CTRL + Console အက Jeff Chow ကပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ အစဉ်မပြတ်ရှုပ်ထွေးအသစ်ကဆော့ဖ်ဝဲပရိုဂရမ်သင်ယူဖို့လိုအပ်ခံရဖို့အသုံးပြုသူများအဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖျက်သိမ်းရေးအားဖြင့် - မစ္စတာ Chow တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုပိုလွတ်လပ်စွာစီးဆင်းခွင့်ပြုမယ်လို့ဆော့ဖ်ဝဲသစ်တစ်ခုဖောက်ဖန်တီးဖို့ထွက်ထားကြ၏။ 2012 အတွက် startup အဖြစ်နှိမ့်ချစ မှစ. , ကုမ္ပဏီစိုက်ပျိုးယခုအခါတစ်ဦးရှိပါတယ်ထားပါတယ် ...
တီဗီသတင်းအချက်ပေး: Times Square 2015 နှင့် Live နှစ်သစ်ကူးအကြိုပွဲလွှမ်းခြုံမှာနောက်ကွယ်မှာ-The-ပြကွက်များ
@VidiGo အဆိုပါအမ်စတာဒမ် Arena အတွက်အေဂျက်များအတွက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာကိုထောက်ပံ့ပေး
အဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆင်ရေး၏စိတ်နှလုံးမှာ VidiGo Arena Solutions, အားကစားကွင်းထုတ်လွှင့်အဆောက်အဦများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာဖြစ်ပါတယ်။ အမ်စတာဒမ်, မတ်လ 13, 2014 - အမ်စတာဒမ် Arena ဘောလုံးကွင်းကလပ်အေဂျက်၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအယူခံဝင်ခြင်းနှင့်နေအိမ်တစ်ဦး '' State-Of-The-Art '' ဘက်စုံသုံးကျိကျိတက်ပြဇာတ်ရုံ, ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအတွက်အကြီးဆုံးနှင့်အရှိဆုံးကောင်းချီးကလပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပရိသတ်ကို Entertaining တစ်ခုဖြစ်ပါသည် ...